Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Emirates isungula iDaily New ukuya eMiami Flight » Page 2
USodolophu waseMiami-Dade uDaniella Levine Cava uthe: “Siyavuya ukwamkela iinqwelomoya ezintsha ze-Emirates eziya kwi-MIA njengoko sandisa amashishini kunye neendlela zokuzonwabisa zokuhamba kubahlali baseMiami-Dade kunye neendwendwe, ezidibanisa neenkcubeko ezintsha kunye noqoqosho olukhulayo. Ukuvula iingcango zethu kwiindwendwe ezitsha ezisuka eDubai kunye nokongeza kuluhlu lwethu olukhulayo lweendawo ezihamba kuzo kwihlabathi liphela luyaqhubeka nokuhlanganisa i-MIA njengendawo yokuhamba yehlabathi.
URalph Cutié, uMlawuli weThutyana weSikhululo seNqwelo-moya saseMiami uthe: “Siyakwamkela ngebhongo i-Emirates kwi-MIA, kwaye sijonge phambili ekwamkeleni abakhweli babo abavela eDubai, kuMbindi Mpuma, kunye namanqaku kwihlabathi liphela. I-Emirates ngaphandle kwamathandabuzo yenye yeenqwelomoya eziphambili kushishino lwethu, kwaye iDubai iye yaba sesinye sezona zixeko zidumileyo kwihlabathi zolonwabo kunye nohambo lweshishini. Njengoko abakhweli bethu basekhaya nabaqhagamshelenayo beqhubeka nokubuyela kuhambo lwenqwelomoya, siyavuya ukubanika inkonzo ekumgangatho wehlabathi e-Emirates eDubai.
UWilliam D. Talbert III, i-CDME, uMongameli kunye ne-CEO yeNgqungquthela ye-Greater Miami kunye neeNdwendwe zeeNdwendwe uthe: “Inqwelomoya yokuqala ye-Emirates isuka eDubai isiya eMiami bubungqina bokwenyani bokumi kweGreater Miami njengendawo yokusangweni yehlabathi kunye nendawo ekuyiwa kuyo ekumgangatho wehlabathi. Njengoko sivula ngokukhuselekileyo iindwendwe zamazwe ngamazwe, siyavuya ukwamkela umthengi wase-Emirates oqinisekileyo ukuba uyayixabisa idolophu yethu eyahlukeneyo, amanzi ajikelezileyo kunye neelwandle ezicocekileyo, kunye nemozulu egqibeleleyo unyaka wonke.
Inkonzo entsha iya kongeza kwakhona uqhagamshelo zorhwebo olukhoyo olubonelelwe yi-Emirates SkyCargo, icandelo lomthwalo we-Emirates, elisebenza ngeenkonzo zokuthutha abakhweli ukuya eMiami ukususela ngo-Oktobha 2020. I-Emirates inikezela umthamo wempahla ngaphakathi nangaphandle kweMiami eququzelela ukuthumela ngaphandle izinto ezinokonakala, i-electronics kunye namanye amacandelo, kunye neempahla ze-e-commerce. Kwixesha elidlulileyo, i-Emirates SkyCargo iphinde yasebenzisa iinqwelomoya ezininzi ezihlawulelwayo ngenqwelomoya yayo iBoeing 777 epheleleyo ukuthutha amahashe aziintshatsheli ukusuka eMiami ukuya kwimisitho yamahashe kwihlabathi liphela. Ukusukela ngo-2019, i-Emirates SkyCargo ihambise ngaphezulu kweetoni ze-7,700 zempahla ngaphakathi nangaphandle eMiami.
Iinqwelomoya eziya nokubuya eMiami ziya kusebenza kane ngeveki kwi-Emirates'iklasi ezintathu i-Boeing 777-300ER, ebonisa amagumbi abucala asibhozo kwiKlasi yokuQala, izihlalo ezingama-42 ezilele kwiKlasi yoShishino kunye nezihlalo ezibanzi ezingama-304 kwiKlasi yoQoqosho. Indiza yase-Emirates i-EK213 iya kumka eDubai (DXB) ngo-3:10 AM iGulf Standard Time (GST), ifike eMiami (MIA) ngo-11:00 AM EDT kwangolo suku lunye, kwaye inqwelomoya ebuyayo i-EK214 iya kumka eMiami ngo-9:10 PM EDT, efika eDubai ngo-7:25 PM GST ngosuku olulandelayo.
Ngokongezwa kweMiami, i-Emirates ngoku ikhonza i-12 gateways e-US kuquka i-Boston, i-Chicago, i-New York (i-JFK ne-Newark), i-Houston, i-Dallas, i-Los Angeles, i-San Francisco, i-Seattle, i-Washington DC ne-Orlando.